के हुन्छ अब हिन्दु परिवारमा नै दाजुकी दुलही भाईसँग बिबाह गरेर बुहारी बनेर भित्रिइन् !
काठमाडौ । केही घटना सुन्दै अनौठो लाग्छ । समाजले समेत पचाउन सक्दैन तर सत्य स्वीकार्नैपर्छ । दुनियाँमा हरेक क्षण केहि न केही गजबको घटना भइरहेका हुन्छन् । केही त अति रोचक हुन्छन् । विहारमा एक यस्तो विवाह भएको छ जुन सुन्ने मानिसहरु पनि आश्चर्यमा पर्ने गर्छन् ।
विहारको दरभंगाको जिल्लामा रहेको एक गाउँमा दुलाहाको गाडी जन्ती जान सजिएको थियो । दुलाहा विवाहको लागि गाडीमा बस्नलाई निस्कदै थिए ।
उक्त समयमा सीतामढीमा बस्ने दुलाहाकी प्रेमिका कांचला आइपुगिन् र दुलाहालाई आफ्नो प्रेमी बताउन थालिन् । प्रेमिकाले माया आफूसँग भएको र विवाह अरुसँग गर्न लागेकोमा आक्रोस व्यक्त गर्दै विवाह हुन नदिने बताइन् । यस्तो आश्चर्यको क्रियाकलाप गाउँका सबैजनाले हेरिरहेका थिए ।
उता दुलही दुलाहा जन्ती लिएर आउँछ भनेर तयारी अवस्थामा बसेकी थिइन् । यता दुलाहाको विवाह भएपछि दुलहीका परिवार धेरै आक्रोशित भए । यसलाई मथ्थर पार्न जुक्ति निकाले । दुवै घरपरिवारको सल्लाह अनुसार दुलाहाको सानो भाईसँग विवाह गरिदिएका छन् ।
एकैदिन दुई भाईको विवाह भएको छ । तर अनौठो त त्यहाँ भयो दाजुका लागि तयार रहेकी दुलही भाईका लागि श्रीमती र दाजुका लागि बुहारी बनेर त्यही घरमा भित्रिइन् । एजेन्सी
दलित नाईबाट कपाल कटाएको भन्दै सैलुन सञ्चालकलाई टोल बहिस्कार, ८० हजार जरिवाना
आम मानिसको कल्पना भन्दा बाहिरको यो प्रतिस्पर्धा खेल्नेलाई भन्ला हेर्नेलाई डर र लाज
एउटै व्यक्तिलाई एकै समयमा कोरोना संक्रमण, डेङ्गू, मलेरियापछि सर्पले ड’स्यो
दैनिक १८ देखि २० रोटी खाने यी १६ वर्षीय किशोरमा देखिएको समस्याले डाक्टर पनि चकित !
बालबाल बच्यो पृथ्वी : उल्का पिण्ड अति नजिकबाट ठोक्किन बच्दै गयो, अब यस्तो कहिले ?
पाँच खुट्टा भएको गाई जन्मिएपछि अशुभ भन्दै गाउँलेले घर गोठ नै बहिस्कार गरे
परिवार बसेर हेर्नै नमिल्ने भिडियो ‘डर्टी डान्स’ लिक, छठ पूजा समितिले आयोजना गरेको खुलासा
२२ वर्षीय युवाका ३ जना पत्नी रोचक त त्यहाँ छ अब ३ पत्नीहरूनै चौथोका लागि नयाँ सौता खोज्दै !
थोरङ्ग गाउँका मात्र १ जना बाहेक सबै संक्रमित पुष्टिको खबरले कोरोनासँग थप त्रास बढ्यो !
नर्सको गलत खोपले बच्चि जन्मिइन् अपाङ्ग, अस्पतालले तिर्यो १ करोड १८ लाख क्षतिपूर्ती
यात्रुले विमान भित्रै जन्माइन् बच्चा, सहयोगी चालक दलको प्रशंसा, बच्चाको जन्मस्थान कहाँ भन्ने ?